Linux Mint 13 Maya ကိုသွင်းပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမည်နည်း Linux မှ
Linux Mint 13 Maya ကိုတပ်ပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမည်နည်း
သူတို့အခါတိုင်း ပိုပြီး အ အသုံးပြုသူများသည် ခင်ဗျားသိတဲ့ဒီဖြန့်ဖြူးမှု ချိုးပါ de Ubuntu ကို နှင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းကိုယူ။ The ဇာတ်ကား သတင်းများပါလာသည်။ အရေးအကြီးဆုံးမှာ၎င်း၏ရေရှည်အထောက်အပံ့သို့မဟုတ် LTS ဖြစ်သည်။
ဤအချက်များကိုရှင်းလင်းပြီးသောအခါ Maya version အသစ်ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေမည့်အရာအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်စာရင်းပြုစုထားသည်။
Menu - Preferences> အပိုဆောင်းယာဉ်မောင်းများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသည့်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်၏ဒရိုင်ဘာကို (လိုချင်ပါက) ကျွန်ုပ်တို့ ပြောင်းလဲ၍ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
sudo apt-get installage laguage-pack-gnome-my ဘာသာစကား-pack-en ဘာသာစကား-pack-kde-en libreoffice-l10n-en မိုးကြိုးငှက် - ဒေသတွင်း - en မိုးကြိုးငှက် - locale-en-en မိုးကြိုးငှက် - locale-en-ar
ဒါကို terminal မှလုပ်ရန်အရေးကြီးသည်၊ မည်သည့်မန်နေဂျာမှမှမဟုတ်ဘဲ၎င်းတို့တွင်အသုံးပြုမှုစည်းကမ်းချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
သိုလှောင်ခန်းများ၌ရှိသည့်ကြီးမားသောဂိမ်းစာကြည့်တိုက်များအပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင် http://www.playdeb.net/welcome/, .deb packages များရှိ Linux စနစ်များအတွက်ဂိမ်းများကိုစုဆောင်းရန်အထူးပြုသည့်နောက်စာမျက်နှာတစ်ခုလည်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Windows ဂိမ်းများကိုပျော်မွေ့လိုပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်အခြားနည်းလမ်းများရှိနေသောကြောင့်စိတ်မပျက်ပါနှင့်။
အချို့သော installation များတွင်ဤအစိတ်အပိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ disk များအခန်းကန့်များကိုစီမံရာတွင်အသုံးတည့်သကဲ့သို့ပျောက်ဆုံးနေသည်။ sudo apt-get install gparted သို့မဟုတ်ပရိုဂရမ်မန်နေဂျာမှစာရိုက်ရန်လွယ်ကူသည်။
လှူဒါန်းမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Juan Carlos Ortiz!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » Linux Mint 13 Maya ကိုတပ်ပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမည်နည်း
နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာအဆက်မပြတ်သော fascial masss ဖြစ်သည်
သေသည့်အရေပြားဆဲလ်များသည်ωerаtіnကိုဖြည့ ်၍ အကာအကွယ်ပေးသည့်အလွှာတစ်ခုဖန်တီးသည်။
Windows ၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်အပြာရောင်ဖန်သားပြင်များနှင့်လက်ရှိမည်သို့ ဆက်လက်၍ ဆက်လက်၍ ရေကူးနေမည်ကိုကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ။ linux mint ကိုသာတပ်ဆင်ပြီးအမှားများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် (ကြော်ငြာဆိုင်းငံ့ထားရန်)၊ ကူးယူရန်နှင့်စောင့်ဆိုင်းစရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်လုပ်ခဲ့သမျှကိုလုပ်နိုင်ပါပြီ။ linux ပူစီနံအတွက်အလွန်ကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
တစ်ယောက်ယောက်က linux mint ကိုဝိုင်ဖိုင်ကွန်ယက်တစ်ခုနှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်ရမည်၊
linux ထဲမှာကတည်းက internet မရှိဘူးလား။
Esteban ရာမို့စ် ဟုသူကပြောသည်
၎င်းသည်သင်၏ကွန်ယက်ကိုအလိုအလျောက်ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးသင်၏စကားဝှက်ကိုသာထည့်သွင်းသည်ဟုယူဆရသည်။ ၎င်းသည် ၀ င်းဒိုးများ၌ထည့်သွင်းစရာမလိုပါ။ အပြင်ထွက်
Esteban Ramos ကိုပြန်ပြောပါ
မာရီယာ del Carmen ဟုသူကပြောသည်
မင်းရဲ့သော့ချက်ကိုမင်းပြောပြနိုင်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမှန်တရားဆိုတာငါရဲ့အီးမေးလ်ထဲမှာငါရှိသလားဒါမှမဟုတ်အသစ်တစ်ခုကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာငါမသိလို့ပဲ။ ကြိုတင်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
maria del carmen အားပြန်ကြားပါ
screenshots xp, view, ခုနစ် ... ငါတို့အားလုံးသွားတယ် ... ဒါကသက်သေပြမယ့်စာမျက်နှာများနဲ့စမ်းသပ်မှုဖြစ်ပါက
အချက် ၇ တွင်ပထမ command သည်မှားသည်။ အမှန်မှာ
မင်းရဲ့ Mint 13 ကိုမင်းရဲ့ PC မှာအဓိကစနစ်အဖြစ်သုံးခဲ့တယ်၊ ငါဒီစာမျက်နှာကိုငါတကယ်သဘောကျတယ်၊ ငါမကြာသေးခင်ကတော့ဖြန့်ဖြူးရေးဖိုရမ် မှလွဲ၍ များသောအားဖြင့်စကားပြောလေ့မရှိတဲ့ဒီဖြန့်ချိမှုထုတ်ဝေမှုနှင့်ပါတ်သက်ပြီးပြproblemsနာအချို့ရှိခဲ့သည်။ ; libreOficce ကိုသုံးတဲ့အခါလုံးဝအေးခဲသွားတဲ့သစ်ကြံပိုးအမှားပါ ၀ င်တယ်။ အထူးသဖြင့်အဲဒါကိုအသုံးမပြုဘဲငါဖြစ်သွားတယ်၊ အလုပ်လုပ်နေဆဲတစ်ခုတည်းသောအချက်က mouse pointer ပဲ။ ဒီရှုပ်ထွေးမှုကကွန်ပျူတာပြန်လည်စတင်ရန်ခလုတ်ကိုနှိပ်ရတော့မယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ငါ့ရဲ့ကိစ္စရပ်မှာ keys + alt + inprPant ကိုသုံးပြီး REISUB ကိုရေးပါ။ သင်ဤ distro ကိုအသုံးပြုသူဖြစ်တာမို့သင်ဤကဲ့သို့သောဖြစ်ခဲ့ရင်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဖြစ်ခဲ့ရင်သင်မေးချင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဤအမှား၏အဖြေအား ရည်စူး၍ ရေးသားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်သည်ယခင်ဗားရှင်းသို့ပြန်သွားရခြင်းမှာအဖြေရှာမရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်သည် Linux Mint 13 ကို 64-bit Mate ဖြင့်အသုံးပြုသည်…လွန်ခဲ့သော ၁၅ ရက်ကပြnoနာမရှိပါ။ ati hd 15 အတွက်စီးပွားဖြစ်ယာဉ်မောင်းကိုမနေ့ကငါထည့်သွင်းခဲ့တယ်။ အားလုံးကောင်းတယ်။ ငါသစ်ကြံပိုးခေါက်ပိုကြိုက်တယ်၊ မစမ်းကြည့်ဘူး၊ ငါသစ်ကြံပိုးသည်အနည်းငယ်နုခဲ့ကြောင်းဖတ်ရှုလို့ပဲငါအိမ်ထောင်ဖက်ကို install လုပ်လေ၏။ ဒါကြောင့်လည်းဖြစ်ရမယ်၊ ခင်ဗျားဟာဒီထက်ကောင်းတဲ့အထိပတ်ပတ်လည်ကြည့်သင့်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်အိမ်ထောင်ဖက်ဒါမှမဟုတ်တခြားစားပွဲခုံကိုသွားရမယ်လို့ထင်တယ်။ linux mint သည်မည်မျှပင်ကောင်းသည်ဖြစ်စေငါ ubuntu, debian, arch တို့ကိုသုံးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံမှ၊ ဤစိတ်အနှောင့်အယှက်များကိုနှစ်သက်သူများအားတစ်ယူသန်ဆန်မှုမရှိဘဲလေးစားမှုရှိစွာဖြင့်ပြောကြားသည်။ ငါအခမဲ့အသိုင်းအဝိုင်းဘက်လျက်။ မားကို့စအမ်
Luis Escobar ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်သည်အလွန်ကောင်းသည်ဟုထင်ပါသည်။ =) ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဤသို့ဆက်လုပ်ပါ။ Linux ကိုမသုံးပါနှင့်၊ အကောင်းဆုံးကတော့ =)
Luis escobar အားပြန်ပြောပါ
hello Gorgon .. ကြည့်၊ ငါ Mint 13 မှာသစ်ကြံပိုးကိုအသုံးပြုနေတယ်၊ ​​ငါမှာရှိတဲ့ပြproblemနာတစ်ခုက desktop နောက်ခံနဲ့ပါ။ (ငါ့အတွက်အဲဒါကိုထိန်းချုပ်ဖို့ Wallch ကို install လုပ်ရမယ်) ငါ့အတွက်အလိုအလျောက်လည်ပတ်နေတယ်မဟုတ်တော့ဘူး၊ အဆိုပါ Mate အတွက်ဖြစ်ပျက်လျှင်အရာ၏ - အဖြစ်အဘယ်သူမျှမ configuration ကို menu ကိုပေါ်လာပါဘူး။
ယခုတွင်ငါသည် 13-bit Mint 32 ကို install လုပ်ပြီးပြproblemsနာများရှိလာသည်။ ဤတွင်ဖတ်ရှုခြင်းအလွန်များခြင်းကြောင့် - google- ၎င်းသည် 32-bit စက်ပေါ်တွင် 64 ကို install လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ တစ်ခုမှာအခြားတစ်ခုထက်၎င်း၏အားသာချက်များရှိပြီး၊ ဘာမှမဖြစ်နိူင်ပါ။ မဟုတ်ရင်၎င်းသည်ပိုမိုပေါ့ပါးလာသည်။ သို့သော်အချို့သောအဆင်မပြေမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထိုအခါငါ 64 သန့်ရှင်းတဲ့ install လုပ်ပြီးပြproblemsနာများကိုတညျ့, ဒီနှင့်အတူငါအားဖြင့်အမြတ်အစွန်းယူပြီးစက်၏အရင်းအမြစ်များကိုအများဆုံး (32 အတွင်း 64 နှင့်အတူဖြစ်ပျက်သောအရာတစ်ခုခု) မှအမြတ်ထုတ်ခြင်းနှင့်ပြtheနာ 64 များအတွက်ထောက်ခံမှုသိပ်မရှိဘူးသောကွောငျ့ ဒါပေမယ့်ငါပြောခဲ့သလိုပဲငါအရင်ကကြုံခဲ့ရတဲ့ပြallနာအားလုံးကိုဖြေရှင်းခဲ့တယ်၊ Mate နဲ့ Cinnamom (Cinnamon) တို့လည်းအတူတူပဲ။
ပါပလော၌ကျွန်ုပ်ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်ရှိမရှိကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်အထူးသဖြင့် MATE နှင့်ဗားရှင်းကိုပတ်ဝန်းကျင်အဖြစ်အသုံးပြုပါသည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်သစ်ကြံပိုးများထက်အမှားအယွင်းများကိုပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး (သင်အသုံးပြုသောပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဝေဖန်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပါ) ။ အကြံဥာဏ်တစ်ခုကတော့ MATE ကိုပြောင်းပြီးသင့်ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မလားဆိုတာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယခုအချိန်တွင်ထိုသို့သောပြofနာကိုကျွန်ုပ်ပထမဆုံးအကြိမ်ကြားဖူးခြင်းဖြစ်သည်။
ဟေ့ ... ငါ့ကိုမြှင့် SystemExit »အမှားတစ်ခုမှတ်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်မသိပါဘူး ?? နင်ငါ့ကိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင် ..
အနီးကပ်ကြည့်ရှုပါ၊ ကျွန်ုပ်သုံးစကားလုံးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး၊ libreoffice 😉 A « laguage »နှင့်« language » ... နှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်းများကိုသာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
စကားမစပ်, post ကိုအလွန်အသုံးဝင်သည်, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလွန်!
Sudo apt- get installageageage-pack-gnome-es ကို install လုပ်သည်
Pepe Wasquez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ဤဖြန့်ဖြူးခြင်းတွင် dnie ကိုတစ်စုံတစ်ယောက်တပ်ဆင်လိုပါကဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိအဆင့်များအတိုင်းသာလုပ်ဆောင်ပါ။ http://bitplanet.es/manuales/3-linux/324-instalar-lector-dnie-en-ubuntu-1210.htmlငါကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ငါဟာပြproblemsနာမရှိဘဲငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။
Pepe Wasquez အားပြန်ပြောပါ
သင်၏လိုင်းများကိုဖတ်ခြင်းသည်မည်မျှကောင်းသနည်း။ 🙂ငါတို့ရှိသမျှသည်တူညီသောအရာကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ Linux အသိုင်းအဝိုင်းမှကြိုဆိုပါသည်။
သေမင်း၏အပြာရောင်ဖန်သားပြင်? ကောင်းပြီ၊ သင်သေချာပေါက် Windows 98 ကိုသုံးသည်။ Windows XP မှစပြီးသင်ဟာကြာရှည်ခံ Windows Vista အသုံးပြုသူမဟုတ်လျှင်ဤအရာများလက်တွေ့မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုကတော့ Windows7🙂
ပြီးတော့ Windows 8 မှာပြန်လာခဲ့တယ်
Ghermain အပြာရောင် ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းသောစာမျက်နှာ၊ ၀ င်းဒိုးမှပြောင်းရွှေ့လာသူများအားကူညီပေးခဲ့သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အပြာရောင်မျက်နှာပြင်နှင့်ကျေနပ်မိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စတိုင်နှင့်တောင်းဆိုမှုများနှင့်အကိုက်ညီဆုံးသောအရာနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိရန် ၅ လကြာအာရုံစူးစိုက်မှုပေါင်းများစွာကြိုးစားပြီး LinuxMint5ကိုအမြဲတမ်းထားခဲ့ခြင်း 13-bit KDE သည်အလွန်ကောင်းပါတယ်။ Redmond မှမှီခိုသူများအပေါ်မူတည်ပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုငါတွေ့ပြီးပြီ။ Wine ကို install လုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏အာရုံကိုဆွဲမထားဘူးဆိုတာပြောရန်ဖြစ်သည်။ Linux တွင်အများစုအတွက်အရာအားလုံးရှိသည်။
Ghermain Blue သို့စာပြန်ပါ
King leonidas ဟုသူကပြောသည်
ငါ Cinnamon ကိုတကယ်ပဲကြိုက်တယ်၊ update တစ်ခုက dialog box ကိုပြသပြီးဖမ်းယူ / ရုပ်ပုံများကိုသိမ်းဆည်းပေးသော screenshot utility နှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemနာအနည်းငယ်သာရှိသည်။
ဖြေရှင်းနိုင်သည့်နောက်ထပ်ပြproblemနာတစ်ခုမှာ GDM ကိုပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင် GDM အခင်းအကျင်းတစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲလျှင်၎င်းသည်၎င်းကိုအသိအမှတ်မပြုပါက၎င်းပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းမှာ GDM မှ MDM သို့ထည့်သွင်းထားသမျှအရာအားလုံး၏အမည်ကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ အလိုအလျောက်အလုပ်လုပ်တဲ့ script (ငါမဟုတ်ပေမယ့်အလုပ်လုပ်တယ်)၊
# esteban1uy မှ GDM အခင်းအကျင်းကို MDM သို့ပြောင်းပါ
gtk.pygtk_version <(2,3,90) လျှင်
def look_in_directory (လမ်းညွှန်):
f အတွက် os.listdir (လမ်းညွှန်) တွင်။
လျှင် os.path.isfile (os.path.join (လမ်းညွှန်၊ စ))
f == "GdmGreeterTheme.desktop" လျှင် -
os.path.join သို့ပြန်သွားပါ (directory, f)
if os.path.isdir (os.path.join (လမ်းညွှန်၊ စ))
look_in_directory (os.path.join (directory, f))! = "" လျှင်
dialog = gtk.FileChooserDialog ("ဆောင်ပုဒ်ဖိုင်ရွေးရန်"),
filter.add_pattern ("* ။ tar.gz")
တုန့်ပြန် = = gtk.RESPONSE_OK လျှင်
GdmFile! = "" ဆိုပါက
o = ပွင့်လင်း (GdmFile + » / MdmGreeterTheme.desktop », »a»)
ပွင့်လင်းသော line အတွက် (GdmFile + » / GdmGreeterTheme.desktop »):
internalfolder = os.path.split (os.path.dirname (GdmFile + » / »)) 
newtar = tarfile.open (fullpath + "/ + + အတွင်းဖိုင်တွဲ + _for_MDM.tar.gz", "w: gz")
newtar.add (GdmFile + » / »၊ ဖိုင်တွဲအတွင်း + » / »)
elif တုံ့ပြန်မှု == gtk.RESPONSE_CANCEL:
King Leonidas အားပြန်ပြောပါ
ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Juan Carlos ။ xD
အချက် ၃ တွင်ဘာသာစကားအစီအစဉ်များကိုတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမှားအယွင်းများဖြစ်ပေါ်စေသော syntax အမှားများရှိသည်။ မှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်
sudo apt-get ကို install-language-pack-gnome-en ဘာသာစကား-pack-en ဘာသာစကား-pack-kde-en
libreoffice-l10n-my မိုးကြိုးပစ်ငှက် - locale-en မိုးကြိုးပစ်ငှက် - ဒေသတွင်း -en-en မိုးကြိုးမုန်တိုင်း - locale-en-ar
Linux mint 13 သည်အသေးအဖွဲမျှသာဖြစ်သည်။ ဒီလက်တော့မှာ winbugs 8 ရှိတယ်။ မကြာခဏ browser ကငါလိုင်စင်တွေပေးရမယ်ဆိုတာမမေ့ဘဲနဲ့အေးခဲသွားတယ်။ သို့သော်မာယာသည်ကောင်းကင်မှအသံတိတ်သွားသည်။
Linux တွင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းသင်၊ စီးရီးများ၊ အက်ကြောင်းများ၊ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး၊ လိုင်စင်၊ ပရိုဂရမ်များရှာဖွေခြင်း၊ ရက်စွဲချဲ့ခြင်း၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ အမှားများ၊
ကျွန်တော့်အတွက်တော့ LinuxMint Maya ဟာ UBUNTU ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့တာကိုတွေ့ရတာအရမ်းဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်သိပ်ကောင်းတယ်မဟုတ်ပေမယ့်အရမ်းကောင်းတယ်၊ ငါက Windows7 နဲ့အတူတပ်ဆင်ထားတယ်၊ ဘာပြproblemနာမှမရှိဘူး။ Wiinmit4.exe ဖြင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ် install လုပ်သည်။ ၎င်းကို install လုပ်ပြီးသောအခါ update လုပ်ရန် update လုပ်ရန်နှင့် upgrade မလုပ်ရန်တစ်ခုတည်းသောအရာသည် synaptic ဖြင့် or or mediubuntu package ကိုဖျက်ပစ်ရမည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည် update နှင့်ထပ်မံအဆင့်မြှင့်ခြင်းပြုလုပ်ပြီးကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပါသည်။ လျင်မြန်စွာလှပပြီးအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။ ငါ%% update ကိုအသုံးပြုသောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုမှန်ကန်စွာမွမ်းမံထားကြောင်းအတည်ပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Roberto Pombo အားပြန်ပြောပါ
linux mint ကို hard disk ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ပြီးမှန်ကန်စွာပြီးဆုံးသွားသောအခါ၊ hard disk မှ boot လုပ်ရန်ကြိုးစားသောအခါ system သည် OS ကိုရှာမရပါ။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ဤ operating system နှင့်အတူကောင်းကောင်းလုပ်နေတာပါ
ဘာလို့ linux mit 13 မှာအခင်းအကျင်းကို install လုပ်လို့မရဘူးလဲ။ gtk + install လုပ်မထားဘူး auyda plis
Fedora ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ - YUM အကြောင်းသိချင်တဲ့အရာအားလုံးနဲ့မမေးမြန်းရဲတဲ့အပိုင်း (အပိုင်း ၁)